Ihe kacha mma na-eme mkpọtụ maka 2021 - Ulo
Nri Ngwaahịa Ọrụ & Ego Nddị Onye India Mma Mma Agbamakwụkwọ Dị Nyocha Nyocha Jụọ Ọkachamara
Ihe mgbochi 10 kacha mma nke na-egbochi snor, yabụ onye ọ bụla nwere ike ịrahụ ụra abalị
Ọ bụghị naanị gị, ụra na-ehi ụra: Mkpesa nke nsogbu ihi ụra na-arị elu n'afọ gara aga, ka Dr. Alon Avidan, prọfesọ nkà mmụta akwara na onye nduzi nke LAlọ Ọrụ Ọrịa Ura UCLA . Anyị ahụwo ntiwapụ nke nsogbu ụra nke nsogbu ụra na ọrịa na-efe efe, n'ihi na ị nwere ndị na-ekiri ihe na-eme ugbu a, ndị mmadụ na-ehi ụra n'akụkụ ibe ha na-enweghị njem azụmahịa iji mebie ya, ọ na-ekwu. Anyị ahụkwala nsogbu na ehighị ụra nke ọma na nchekasị, na-eduga na nrọ na-adịghị mma. Ma ugbu a, ụfọdụ ndị na-ebuwanye ibu n’ihi na ha nọ n’ime ụlọ ma ọ naghị arụ ọrụ, nke nwekwara ike ibute nraranye ụra.
Ma e nwere ikwo ụra — mkpọtụ na-atụ ụjọ nke ụra nke nwere ike igosipụta nsogbu ahụike siri ike ma na-eme ka abalị izu ike ghara ikwe omume, ma nke ndị snorer ma ndị snoree ahụ? Nke a bụ otu esi emeso ya.
Gịnị na-akpata Ikwo ụra, agbanyeghị?
Ihe na-eme ka a na-anyụ ụra bụ ihe mgbochi na ikuku ụgbọelu, na-eduga n'ịgba ume na-eme mkpọtụ nke mkpọ dị nro nke ụzọ elu.
Dr. Avidan na-agwa anyị, Mgbe ndị ọrịa gwara m, 'Dọkịta, m na-akọ ụfụ kwa abalị ma ọ na-enye nsogbu ma na-eduga ụra oge ehihie,' mgbe ahụ, m ga-achọ ịtụ nyocha ụra n'ihi na snoring ahụ nwere ike igosi ọnọdụ dị njọ karịa ụra apịtị, nke bụ mgbe iku ume na-akwụsịtụ site n’oge ruo n’oge. Ọnọdụ ahụ, dị ka yolọ Ọgwụ Mayo , nwere ike iduga ụra ụbọchị, nkụda mmụọ ma ọ bụ iwe ugboro ugboro, ihe isi ike itinye uche na nnukwu ihe egwu nke ọbara mgbali elu, nkụchi obi ma ọ bụ ọrịa strok. Yikes! Otú ọ dị, mgbe a nyochachara ya n'ụlọ ọgwụ na-ehi ụra ma ọ bụ jiri ngwá ọrụ nyocha nke ụlọ n'okpuru nduzi nke ọkachamara ụra, Dr. Avidan na-ekwu, a pụrụ ịkọwa ọtụtụ usoro ọgwụgwọ, gụnyere teknụzụ ọhụụ ọhụụ dị ka onye na-eche nche n'ọnụ na-agbazi agba ntinye, ihe nkpuchi ikuku CPAP na, ikekwe nke kachasị, ohiri isi mgbochi.
Olee otu mgbochi ohihi Ohiri Isi Na-enyere Aka?
Dr. Avidan na-ekwu na ohiri isi mgbochi bụ akụkụ nke ọgwụgwọ ọnọdụ - nke ọma, ime ka ndị na-atụ ụjọ kwụsị ịrahụ ụra n'azụ ha kama ịdabere n'akụkụ ha. Mgbe ị laghachi azụ enwere ohere karịa maka ire iji zuo ike na ikuku elu na igbochi iku ume, yabụ ịgbanwe ọnọdụ ahụ n'akụkụ n'akụkụ na-ewepụ ihe ize ndụ ike ndọda, ọ na-ekwu. (Ya mere nke ahụ bụ Gini mere ị na-agagharị na onye na-atụ egwu na-emechi ha!) Ọ bụ ezie na Dr. Avidan anaghị akwado otu akara ọzọ, ọ na-atụ aro ịlele asambodo FDA maka ngwaọrụ mgbochi snoring, ma ọ bụ na-atụ aro maka mbanye anataghị ikike n'ụlọ: can nwere ike were akpa azụ ma tinye Ohiri isi na ya ma soro ya hie ụra, ka ị ghara ịtụgharị n'azụ gị.
Ọ bụrụ na ị dịchabeghị njikere ihi ụra na Jansport kegidere jammies gị, lee nyocha anyị nke ohiri isi mgbochi snore kachasị mma n'ahịa taa.
usoro ntanetị dị ka ihe ndị bịara abịa
Njikọ: Anyị jụrụ onye ọkachamara na-ehi ụra otu esi ehi ụra 8 awa n'ime awa 4 (ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume)
ihunanya hot hollywood movies list
The Best Anti-Snore Ohiri Isi na a ilekiri:
Backdị akpa akpa kacha mma: WoodyKnows 2021 Ebe emere ka enwee uzo ohuru
Best Wedge Ọdịdị: Zuma ụfụfụ Wedge Ohiri Isi
Kasị Mma Nzube Gel Design: Technogel Ihi ụra Anatomic Gel Ohiri Isi
Nkwado olu kachasị mma: The Sharper Image Advanced Anti-Snore Ohiri Isi
Belkpụrụ Kachasị Mma: Slumberbump
Ihe kacha mma: Izipu Ọzọ Alternative
Kacha mma mgbanwe adiro: Coop Home ngwongwo Eden Shredded Memory ụfụfụ Ohiri Isi
Kacha mma Ogwe aka ezumike Design: Sona Ohiri Isi Omuma mgbochi Snore Ohiri Isi
Kachasị mma maka ndị na-ehi ụra n'akụkụ: Mmanụ aeyụ na-atụ egwu n'akụkụ ụra
Kasị mma Ọkà okwu Fanye: Ozo Ogwu O
1. WoodyKnows 2021 New Upgraded Side-Ihi Ura Akpa
Backdị akpa akpa kacha mma
Branddị ọ bụla na-eme ka ọ ghara iru ala ka onye ọrịa dinara n'azụ ha ga-eme aghụghọ ahụ kwuru Dr. Avidan. Anyị na-amasịkwa ihe nlereanya a maka eriri nịịlị ya dị nro na zipa na-enweghị nchacha. Anyị na-enwe ekele na e nwere obere akpa n'ime inflatable ị nwere ike ịkọwa maka nchekwa ma ọ bụ njem.
2. Zuma Foam Wedge Ohiri Isi
Dị Wedge kacha mma
Nke a bụ ọgụgụ isi-mgbe etinyere ya n'akụkụ kachasị ogologo, ọ na-eweli isi gị elu, nke na-ewepụta ire gị na olu dị nro site n'ụzọ ikuku (ọ nwekwara ike inye aka na mmiri reflux na iwepụ nrụgide na elu na n'olu) . Mgbe ohiri isi na-eguzo ọtọ site na iji akụkụ ya kachasị warara dị ka ntọala, ọ na-eme ka azụ dị jụụ ịnọdụ ala ma na-arụ ọrụ na akwa.
Zụta ya ($ 49)
Relax The Azụ
3. Technogel Ihi ụra Anatomic Gel Ohiri Isi
Kasị Mma Nzube Gel
Temperaturelọ oyi na-ajụ oyi — nke dị n’agbata ogo 60 na 65, dị ka Dr. Avidan si kwuo — pụrụ inyere ndị na-ehi ụra nke ọma aka ihi ụra ma nọrọ n’ụzọ ahụ. Ohiri isi a nwere ihe ntinye gel nke na-adọta okpomọkụ site na isi gị iji gbasaa n'ime ime ụlọ. Nke pụtara na onye ị na-ehi ụra ekwesịghị ịma jijiji naanị n'ihi na ịchọrọ ụlọ ime ụlọ. Ọzọkwa, usoro ergonomic na-eme ka isi gị na spain kwekọọ ka ị ghara ibili na ọnya azụ.
Zụta ya ($ 179)
4. Sharper Image Advanced Anti-Snore Ohiri Isi
Nkwado olu kachasị mma
Chọrọ obere enyemaka iji zụlite onwe gị ịrahụ ụra n’akụkụ gị? Ohiri isi a na-ekpo ikuku nke ikuku nwere obere uzo di n’etiti otu idina isi gi, na-apukwa ya n’ime onodu a n’agaghi anwa gi iwepu.
kpochapụwo bekee ihunanya fim
Zụta ya ($ 70)
Belkpụrụ Kacha Mma
Belt a na-egbochi mesh ị na - egbochi gị inwe nkụja, mana ọ na - egbochi gị ịkpụgharị na azụ ụra anyị. Typesdị Claustrophobic ga-enwe ekele na, n'adịghị ka ohiri isi ụdị akpa, ụdị a enweghị eriri ubu nke nwere ike ime ka ị chee, oh, ị ga-ehi ụra.
mfe songs na-abụ abụ
6. Zipu Ozi Ọzọ
Best Down ọzọ
Chọrọ ohiri isi dị nro, mana ka ọ dị mkpa ijide n'aka na ohiri isi gị ga-ejide isi gị iji gbochie mkpọchi ụgbọelu na-atụ ụjọ? Ihe nlereanya a na-arụ ọrụ ahụ, hypoallergenically, na eriri ndị ọzọ na-emepụta obere akpa ikuku, n'akụkụ ụyọkọ ụyọkọ ụyọkọ ụyọkọ mmiri nke na-akwado nkwado ahụ.
Zụta ya ($ 95)
7. Coop Home ngwongwo Eden Shredded Memory ụfụfụ Ohiri Isi
Best Kemeghi ulo
N'ime ya jupụtara na ụfụfụ ebe nchekwa gel-ị nwere ike iwepụ ma ọ bụ tinye azụ ruo mgbe ị nwetara ogo zuru oke maka ụra na-enweghị snore nke dị mma (na ekele maka gel, jụrụ oyi) maka izu ike abalị dum.
8. Sona Ohiri Isi Omuma Anti-ekwoso Ohiri Isi
Kacha mma Ogwe aka ezumike
Ndị na-egbu nri n'akụkụ, anyị na-ahụ gị, anyị nwetara gị: Ohiri isi a nwere ụdị amamihe nke na-enye ohere ma ogwe aka ka ọ tunye n'okpuru ohiri isi, na-edobe ahụ gị n'akụkụ n'akụkụ na-enweghị ime ka ogwe aka gị ma ọ bụ ubu gị hie ụra.
$ 60 site na Amazon
9. Mmanụ aeyụ na-atụ egwu n'akụkụ ụra
Nke kachasị mma maka ndị na-ehi ụra n'akụkụ
Ọkpụkpụ cutic semicircle na-eme ka ohere maka ubu gị iji kpuchie onwe ya, ma nwee ike gbanwee ya na mmasị gị. Ọzọkwa, mgbakwunye nke ọla kọpa na ụfụfụ ebe nchekwa ahụ bụ ma obi jụrụ na antimicrobial.
$ 100 si Amazon
esi ewepu ntutu ihu na ulo dika okike
10. Ogwu Obochi Sona O
Kasị mma Ọkà okwu Fanye
Ekepụtara dị ka ite na-efe efe, ohiri isi a na-enweta raves site n'aka ndị ọrụ na-ekwupụta na obere mkpọda ya na-emegharị agba ha, si otú a na-eme ohere maka ikuku na ụzọ iku ume ha mgbe ha na-ehi ụra. Ego: Akụkụ ahụ etinyere n’etiti okpuru zuru oke maka igwe okwu Bluetooth ma ọ bụ padị na-esi ísì ụtọ lavender iji nyere gị aka ịrahụ ụra.
$ 46 site na Amazon
Njikọ: 24 Onyinye Eco-Enyi na Ego Maka Ezigbo Onye Ọ bụla You Maara
Plọ ahịa na-ehi ụra nke ọma
$ 100 Zụta ugbu a
Deep Ihi ụra Ohiri Isi raygba
$ 29 Zụta ugbu a
Mgbakwunye Nkwado ihi ụra Zzzz
$ 10 Zụta ugbu a
White Noise Sound Ngwa igwe
$ 80 Zụta ugbu a
Manta Ihi ụra
Categories Nri Agba Style Kichin Na-Adịgide Adịgide
ntutu ntutu isi maka ụmụ nwanyị
mmanụ almọnd maka ntutu isi otu esi eji
ahụekere bọta na almọnd bọta
kasị ihunanya fim bekee
akwa mmiri maka nnukwu bọs
kacha mma ihunanya fim na-ekiri